Manana ny tanjany manokana amin’ireo sehatra ireo izay azo trandrahina tsara tokoa mantsy ity faritany iray ity raha araka ny fanazavan’ireo mpikambana ao anatin’ny komity mikarakara ny fifidianana omaly. Tsy ireo mponina any an-toerana irery anefa no miandraikitra izany fa ireo mila ravinahitra any amin’ ny faritra hafa ihany koa. Mba hahafahana manatanteraka ny asa dia hotontosaina ny 6 aogositra ho avy izao eto Antananarivo ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny FIZAFATO. Efa misy ny komity manokana hisahana izany, fanapahan-kevitra tapaka nandritra ny fivoriana farany notontosain’izy ireo ny volana mey lasa teo. Miisa 30 ireo mpikambana ao. Omaly izy ireo dia nanao fanambarana ny amin’ny fepetra takina ho an’ireo kandidà vonona ny hilatsaka hofidiana ho filohan’ny fikambanana. Arahina taratasy misy ny vina fampandrosoana an’i Toliara sy ny mponina ao aminy ny taratasy fangatahana filatsahan-kofidiana. Amin’ny 29 jolay ho avy izao kosa no havoakan’izy ireo ny lisitra ofisialin’ireo kandidà hofidina. Ezahina hatao ao anatin’ny mangarahara tanteraka ny fifidianana, hoy hatrany izy ireo.